Kandidà Rajoelina tao Antanifotsy: “Hiady amin’ny kolikoly sy hametraka fandriampahalemana isika…” | NewsMada
Kandidà Rajoelina tao Antanifotsy: “Hiady amin’ny kolikoly sy hametraka fandriampahalemana isika…”
Fanamby lehibe. “Anisan’ny antony nilatsahako hofidina ny hiady amin’ny kolikoly sy hanampy amin’ny hisian’ny filaminana sy fandriampahalemana tanteraka eto amin’ny tany sy ny firenena Nahatonga ahy manao ny IEM izany”, hoy ny kandidà laharana faha-13 Rajoelina tao Antsahalava distrikan’Antanifotsy , omaly nanoloana ireo vahoaka marobe. Nambarany fa mendrika fiainana tsaratsara kokoa noho izao ny vahoaka malagasy. Mila tanora tia tanindrazana sy mahafoy tena ho an’ny vahoaka isika. Nanteriny koa fa tsy mandry alina ny ankamaroan’ny vahoaka ary betsaka ny dahalo sy ny mpamaky trano.
Haverina ny fandriampahalemana
Nohitsiny anefa fa manana tetikasa manokana momba ny hamerenana ny fandriampahalemana manerana an’i Madagasikara ny tenany. “Efa nividy angidimby sy fiara 4×4 maro isika tamin’ny Tetezamita. Omeko môtô ny mpitandro ny filaminana. Hasiana “poste avancé”isaky ny kaominina miaraka amin’ny môtô sy fiara tsy mataho-dalana. Tsy maintsy tonga ny mpitandro filaminana rehefa miantso ianareo . Hosoloina avy hatrany izy ireny rehefa tsy mamaly ny antson’ny vahoaka.”, hoy izy. Notsindriny fa maro ny mpitandro filaminana miray tsikombakomba sy miaro ny mpanao ratsy ka tsy maintsy horaisina ny fepetra.
Ankoatra izany, nampanantena ny hanangana “lycée agricole” any an-toerana ny tenany ho an’ny tanora afa-panadinana. “Homena fitaovana ary afaka mamboly avy hatrany. Hasiana toeram-piofanana hahafahana manofana ny mpamboly ihany koa ho an’ireo hiasa avy hatrany. Natao hihainoana ny mangirifiry antsika ny IEM”, hoy ihany ny kandidà Rajoelina.
Porofoina ny fitiavana fa tsy am-bava fotsiny…
Nialoha izany, nitondra ny hetahetany sy ny olana any an-toerana ny ben’ny Tanàna sy ny depiote. Teo koa ny solontenan’ny tanora sy ny vehivavy, ny mpampianatra, ny fikambanana eny anivon’ny fiangonana.
Manoloana ireo rehetra ireo, nambaran’ny mpanorina ny IEM fa asa ny azy fa tsy kabary. “Porofoina ny fitiavana fa tsy lazaina sy ambara fotsiny. Hitondra fahazavana, hitondra fanantenana fa tsy hitondra fahantrana. Miaina ao anaty fahantrana ny Malagasy. Hitondra fampandrosoana isika”, hoy izy.